Homeसमाचारसुन्दरी नायिका वर्षा सिवाकोटीको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन्?
April 6, 2021 admin समाचार 3283
सुन्दरी ना’यिका वर्षा सिवाकोटीको आज जन्मदिन परेको छ । आजबाट उनी २८ वर्षमा लागेकी छिन् । पशुपति’नाथको मन्दिरमा पूजा गरी आफ्नो जन्म’दिनको सुरुवात गर्ने उनी यस पटक पनि पशुपतिनाथ बाट दर्शन गरेर आफ्नो नयाँ दिनको सुरुवात गरेकी छिन् । नाइँ नभन्नु ल २ू ९सन् २०१४० बाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा डेब्यू गरेकी यि सुन्दरी नायिकाले पशुपति प्रसाद मा अ’भिनय गरेर वाहवाही बटुलेपछि कहिल्यै पछाडी फर्केर हेर्नु परेन ।
‘प्रसाद, गाँजा बाजा, पु’रानो बुलेट, वीर विक्रम २, टुल्की, लप्पन छप्पन, भैरे’ लगायत चलचित्रमा अभिनय गरिस’केकी वर्षा प्रेम र रोमान्स’का कारण पनि चर्चामा आइरहने सुन्दरी हुन् । हालै ब्रेकअपका कारण चर्चामा रहेकी वर्षाको नाम एक समय निर्देशक मिलन चाम्ससँग पनि जोडियो । मिलनसँग हल्ला चलेको केही स’मयपछि उनी अमेरिकामा रहेका युवकसँग प्रे’ममा रहेको चर्चा सुरु हुन नपाउँदै ब्रेकअपको खबर फैलियो ।
सामाजिक सं’जालमा समेत औधी सक्रिय हुने यि सुन्दरी सामाजिक गतिबिधि र राजनैतिक विषयमा समेत सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिन रुचाउने अभिनेत्री हुन् । उनको जन्मदिनको अ’वसरमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनका शुभ’चिन्तकले शुभकामना दिइरहेका छन् । ओएस नेपालको तर्फबाट वर्षा सिवाकोटीलाई जन्म’दिनको शुभकामना ।
यो पनि: नेकपा मा’ओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने चार मन्त्रीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरि निष्काशित गरिएको छ । पार्टीबाट निष्का’शित हुनेमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,उद्यो’गमन्त्री लेखराज भट्ट,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह रहका छन् । यी चारे मन्त्री अलातलको फैस’लापछि एमाले तिर गएका थिए
पार्टीमा आ’उन पटक -पटक आग्रह गरेपनि अटेर गरि सांसद पद जाओस् तर ओलीको साथ छोडिन्न भन्दै अटेर गरी बसे’का थिए । आजै गृहमन्त्री राम बहादुर था’पालाई पनि कारवाही गरेको पत्र संघीय संसद् सचि’वालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको माओवादी केन्द्रले बता’एको छ । ओएस नेपालबाट
जेरिका भाइ बिजय हुनेवाली श्रीमती सहित मिडियामा, सपना संग छिट्टै बिहे गर्दै (भिडियो सहित)
May 13, 2021 admin समाचार 3257
लोकदोहोरी क्षेत्रमा सबैको मन मुटुमा बसेको गायि’का बबिता बानिया जेरिको भाई’को बिहे हुने भएको छ। गायिका सपना रोका र बिजय बिच सम्ब’न्ध रहेको खुलेको छ। उनीहरु एकसा’थ मिडियामा आएका हुन्।जेरिले बिहे गरेको झन्डै २ बर्ष
April 15, 2021 admin समाचार 2864
नायक किशोर खति’वडालाई आफ्नो श्रीमान दावी गरेकी महिला र किशोर आ’मने सामने भएका छन् । चलचित्र रावण मा’र्फत नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेका क’लाकार किशोर खतिवडा माथि एक महिलाले श्रीमान दावी गर्दै अहिले धो का दिएको
April 22, 2021 admin समाचार 2597
पुनर्निर्माण सम्प’न्न भएको ऐतिहासिक धरहरामा बुधवार (आज) गजुर राखि’एको छ । नेपाली सेनाले विगुल फुकी, मङ्गल धुन र स्वस्तिक वाचनसहित बिहान ८ः०० बजेको शुभ साइतमा राष्ट्रिय पुनर्नि’र्माण प्राधिकरणका का’र्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसहितको सहभागितामा गजुर राखिएको
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206987)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206644)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201839)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201681)